Ividiyo: Ukusebenziseka xa kuthelekiswa noYilo
NgoLwesine, uJuni 10, 2010 Lwesine, Okthobha 29, 2015 Douglas Karr
UJon Arnold wenza umsebenzi omangalisayo ochaza into eyenziwa yinkampani yakhe, iTuitive = Ukusebenziseka. Kukho ezinye izinto ezintle apho ungaze ubone ukukhanya kwemini. Isicelo sinokusombulula imiba enzima kakhulu, kodwa ukuba akukho mntu unokufumana indlela yokuyisebenzisa, ukushiya kuya kuba phezulu kwaye ukuthengisa kuya kuba nzima.
Abaphathi bebhrendi, abaphathi bemveliso kunye nabayili bemizobo bahlala bemisela ukujonga kunye nokuziva kwesicelo. Ukusebenziseka kumiselwe ngumsebenzisi, nangona! Ukusebenziseka kweengcali kugcina nokwandisa ukuhlangana kunye nesoftware ukuqinisekisa ukuba inomdla kwaye kulula ukuyisebenzisa. Kakhulu yokuzonwabisa.
Ukufaneleka kunika ezi nkonzo zilandelayo:
Uphando loMsebenzisi - "Yazi abasebenzisi bakho, kuba ayingabo." Endaweni yokuyila "umsebenzisi" ocingelwayo, masityhile iimfuno zabasebenzisi bakho, indlela yokuziphatha kunye neenjongo zabo.
Ukudibanisa Uyilo lonxibelelwano kulapho ulwazi lweenjongo zabasebenzisi bakho liguqulelwa ekusebenzeni okunentsingiselo kunye nokusebenziseka ngokulula.
Uyilo lojongano lomsebenzisi Uyilo olulungileyo ngamanye amaxesha lunokuba bubuhle bobuchule bokuyila kwaye ngamanye amaxesha ubuhle bokulula. Siza kuyifumana ngokuchanekileyo, kwaye ngendlela exhasa izicwangciso zakho zohlobo lwebrand.
Design web Inkqubo yoYilo oluSebenzisiweyo yoMsebenzisi ilungile kwiiwebhusayithi ekufuneka zingaphezulu kwencwadana ekwi-Intanethi.
Ukuvavanywa kokusebenziseka -Misa ukuqikelela. Ukuvavanywa kokusebenziseka kwethu kuya kuqinisekisa ukuba zeziphi iindlela ezisebenzayo ezinokuthi zilungiswe kwiziphumo ezingaphezulu.
Jonga uJon Arnold's ibhlog emnandi.
Kumashishini, iMidiya eNtsha AKULULA